प्रधानमन्त्रीका आगामी दिन अझै असजिलो - नेपालबहस
प्रधानमन्त्रीका आगामी दिन अझै असजिलो
| १७:२८:०० मा प्रकाशित
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु जुटनु र फुटनु कुनै नौलो कुरा होईन । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि वर्तमानसम्मकोे आरोह अवरोह हेर्दा कहिले जुट्ने, कहिले फुट्ने, कहिले विद्रोहमा जाने, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि कहिले भूमिगत बस्ने त कहिले शान्तिवार्ता मार्फत फेरि खुल्ला राजनीतिमा आउने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नियमित श्रृङ्गखलाहरु भित्रै पर्ने कुराहरु भए । यसरी मिल्ने र छुट्टीने प्रक्रियालाई क्रमभंग गर्दै अब कहिल्यै नछुट्टीने बाचाका साथ एकाकार भएका नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओबादीहरु पनि अहिले आएर एकै ठाउमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा फेरि देखिएका छन् ।
नेकपा नामको नयाँ पार्टी निर्माण गरि अगाडि बढ्न चाहेको वर्तमानको कम्युनिष्ट पार्टीमा पूर्व माओबादी भने आफ्नाे अगाडिका राजनैतिक कमी कमजोरीहरु बिर्सिएर सुध्रिन चाहान्थ्यो भने पूर्व एमाले आफु मैमत्ता र आफु मात्रै ठूलो र राम्रो भन्दै बिग्रिन चाहेको जस्तो आभाष अहिले आएर देखिदैछ ।
देशकै ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बिग्रीने र सुध्रिनेको गोलचक्करमा अहिले देश र जनताहरु भने आँटा पिसिएझै पिसिनु परेको छ । विगतको राजनैतिक पृष्ठभूमी हेर्दा पूर्व दुबै दलका नेताहरुको उद्गम स्थल एकै नै देखिन्छ । कोहि तरबार त कोहि बन्दूकको नालबाट राजनैतिक परिपार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् । यसैले पनि दुबैको कहि न कहि राजनैतिक जात र गोत्र चाँहि मिल्दो जुल्दो नै देखिन्छ । पूर्व तरबारधारी र पूर्व बन्दूकधारीको मिलनले सत्ता त मिल्याे तर शासन भने मिल्ने छाँट छैन । पछिल्लो नेपाली समाजमा एकै गोत्रका थरहरु भएकाहरु बीच पनि बिहाबारी चल्न छोडिसकेको बिषयमा भने यि एकै थर र गोत्रका दलहरु र ति दलहरुलाई नेतृत्व गर्ने सारथिहरुलाई अनभिज्ञता रहनु आठौं आश्चर्य भएको छ ।
वर्तमानका प्रधानमन्त्री तथा तात्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओबादी पार्टी मात्र हैन पूर्व माओबादी नेताहरुलाई नै निमिट्यान्न पार्ने अभियानमा लागि परेका छन् । आफुलाई पार्टी भित्र जिउँदो बाघ संझने केपी शर्मा ओलीलाई माओबादी पार्टीसँग त्यति खेरै औधि रिस उठेको थियो जतिखेर तत्कालिन झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ बाट संबिधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा आफ्नाे नातिको उमेर सरहको नेकपा माओबादीका उम्मेद्धार विश्वदिप लिङ्गदेनले केपी शर्मा ओलीलाई अत्यधिक मतान्तरले पराजित गरिदिएका थिए । आफु कहिल्यै निर्वाचन नहार्ने बिगुल फुकेका ओलीलाई एउटा ठिटो केटोले अत्यधिक मतान्तरले पराजित गरिदिनु उनका लागि त्यतिखेर अत्यन्तै लाजमर्दो बिषय बनेको थियो ।
सरकार चलाउँदा दोश्रो वरियताका अध्यक्ष प्रचण्डको उनले कुनै पनि सल्लाह नै लिएनन् । ओली बालुवाटार छिरे पछि झनै उट्पट्याङ्ग कुरा गर्ने माहा गफाडि पो निस्किए । उनका पटक पटकका हावादारी गफ सुनेर विपक्षी दलमात्र हैन उनकै दलका शिर्ष नेताहरुसमेत बिच्किए । एक पछि अर्का एकलौटी निर्णयहरुले पार्टी एकताको मर्म मै चोट पुर्याईरहेको थियो । झन ओलीले आफु पुरै पाँच बर्षै प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सार्वजनिक समारोहमै भन्दै हिँडन थाले पछि यसले पार्टी भित्रै झनै ठूलो तरंग लियो ।
आफुलाई राजनितिको चतुर खेलाडि मान्ने ओलीलाई आफु निर्वाचनमा पराजित हुन्छु भन्ने क्लेश पनि आशंका थिएन तर उनि हारे । यो हार नै उनका लागि राजनितिको गलपासोको रुपमा रह्यो । त्यसपछि उनले जे र जसरी हुन्छ यो माओबादी पार्टीलाई सिनित्तै पारेरै छोडछु भन्ने दृढ अठोट मनमा धरे । जसका लागि उनले आफ्नै दलसँग माओबादी पार्टी एकिकरण गराउने र माओबादीलाई धुलिसात बनाउने योजना बुने ।
तत्कालिन नेकपा एमालेका केहि नेताहरुलाई उनले राम्रै प्रलोभनमा पारेर दुबै पार्टीलाई मिलाउनका लागि कारिन्दाको रुपमा खटाए जसमा वर्तमानका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम मुख्य पात्र हुन । अरुलाई भन्दा सजिलै वामदेवलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेका ओलीले वामदेवलाई पहिला गोप्य रुपमा र पछि खुल्ला तवरले माओबादीसँग वार्ता गर्न लगाए ।
देशमा संबिधान निर्माण भई संसदीय निर्वाचनसम्म आईपुग्दा पनि झापामा निर्वाचन हार्ने अवस्था देखेपछि उनले माओवादी पार्टीको भर पर्नुभन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तालमेल गरेर अगाडि बढनु बुद्धिमानी ठाने । भलै त्यस बेलासम्म एमाले र माओबादीले समिकरणमै आफ्ना उम्मेद्धवारहरु उठाएका थिए । तर माओवादीको बिगतको चोट बिर्सिन नसकेका ओलीलाई माओबादी भन्दा राप्रपा नै भरपर्दो मित्र मानें ।
यसका लागि उनले झापा जिल्ला जस्तो कम्युनिष्ट पार्टीको उद्गमस्थलमा समेत एउटा निर्वाचन क्षेत्र राप्रपाका लागि छुट्याए । राप्रपाका उम्मेद्धवारलाई भोट मागि दिन उनि आफै निर्वाचन क्षेत्रमा खटिए । संघियता बिरुद्धको नारा लिएर राजतन्त्रको वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्धवारलाई काँधमा बोकेर हिडन समेत ओलीलाई किञ्चित पनि लाज लागेन ।
दुई कम्युनिष्ट पार्टीको समिकरणका कारण दुबै कम्युनिष्ट पार्टीको जोडले निर्वाचन परिणामले झण्डै दुई तिहाईको संख्या टेक्यो । देशले बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारको मुख देख्यो । आफुलाई पहिलो बरियताको अध्यक्ष बताउने ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । आधा आधा प्रधानमन्त्री चलाउने संझौता पार्टी एकिकरण गर्दा यस अघि नै तय भैसकेको थियो ।
तर ओली प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने सोचमा थिएनन् । त्यहि भएर सरकार चलाउँदा दोश्रो वरियताका अध्यक्ष प्रचण्डको उनले कुनै पनि सल्लाह नै लिएनन् । ओली बालुवाटार छिरे पछि झनै उट्पट्याङ्ग कुरा गर्ने माहा गफाडि पो निस्किए । उनका पटक पटकका हावादारी गफ सुनेर विपक्षी दलमात्र हैन उनकै दलका शिर्ष नेताहरुसमेत बिच्किए । एक पछि अर्का एकलौटी निर्णयहरुले पार्टी एकताको मर्म मै चोट पुर्याईरहेको थियो । झन ओलीले आफु पुरै पाँच बर्षै प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सार्वजनिक समारोहमै भन्दै हिँडन थाले पछि यसले पार्टी भित्रै झनै ठूलो तरंग लियो ।
देशमा भ्रष्टचारका एक पछि अर्का आँकडाहरु जनमानसले बुझ्ने गरी छताछुल्ल भए । आफ्नै सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारको आरोपमा हात धुनु पर्ने अवस्थामा देखिए । बलात्कारका घटना घटेनन् झनै बढे । स्वयं सभामूख नै बलात्कारको आरोपमा जेल परे । सरकारका प्रधानमन्त्री पटक पटक बिरामी परे । यहि समयमा प्रधानमन्त्रीले थप दुईवटा किडनी आफ्नै शरिरमा धरें । देशको कार्यकारी प्रमुख बिरामी परेर अस्पतालमै महिनौं बिताउनु पर्यो । कोरोनाको माहामारीमा पनि जनतालाई आवश्यक स्वाथ्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको भनेर सरकारलाई अबगाल मात्र पर्यो ।
स्वास्थ्य सामाग्रीमा कमिशनको चक्कर चलाएर स्वयं सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री बदनाम भए । झण्डै सेनालाई औषधि किन्न लगाएर भ्रष्टाचारको आफ्नाे लगाम खुस्क्याएर सेनालाई करेली लगाउन भ्याए । ओछ्यानमै सुतिसुती प्रधानमन्त्रीले यहि समयमा बिभिन्न प्रकारका बिरोधाभाषपूर्ण अध्यादेश समेत ल्याए । जनता माहामारीमा परेर मृत्युसँग संघर्ष गर्दा समेत जनताका घर आँगनमा कहिल्यै पुग्न भ्याएनन् बरु बिरामी प्रधानमन्त्रीले शितल निवास र भैसेपाटी भने राम्ररी नै धाए ।
पूर्व एमालेलाई एकजुट पारेर पूर्व माओबादीलाई निमिट्यान्न पार्ने अनेकौ तानाबाना बुने । यसका लागि त उनले आफ्ना सल्लाहकारका कुरा मात्रै धेरै सुने । पार्टी र सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा समेत उनलाई हेक्का नै भएन । जनताका नजरमा नेकपाको सरकारको शाख गिर्दै गएको यिनलाई पत्तै भएन ।
सरकारले यि यि काम राम्रो गर्यो भनेर सिंगो पार्टीले भन्नै परेन । एउटै ध्याउन्न कसरी प्रचण्डलाई सिध्याउने, कसरी पूर्व माओबादीका नेताहरुलाई आप्mनो गुट भित्र छिराउने भन्ने ध्याउन्नले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई देश बिकासको काममा क्रियाशिल हुन समय नै पुगेन । तर माओबादीको केहि नेताहरु आफ्नाे पक्षमा पार्दै गर्दा आफ्ना पुराना एमालेका बरिष्ठ नेताहरुले आफ्नै साथ छोडेको पत्तै पाएनन् ।
यिनले आफ्नाे दलका बरिष्ठ नेताहरुसँग कहिल्यै पनि राम्रो ब्यवहार र सरसल्लाह गरेर अगाडि बढनु पर्छ भन्ने कुरामा ध्यानै लाएनन् । उनको झण्डै ३ बर्षको बालुवाटार बसाई पूर्व माओबादी पार्टीलाई र बर्तमानका प्रचण्ड गुट भनिएका नेताहरुलाई तर्साउन, धम्क्याउन र आफ्नाे पक्षमा पार्नका लागि मात्रै ब्यतित भए । यहि कुरालाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका नेकपाका नेताहरुले भने बिस्तारै ओली बा को साथ छोडदै गए ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त ओलीले तानाशाही प्रबृत्तिको बाटो अबलम्बन गरे । आफु र आफ्ना आसेपासे भन्दा बाहिर निस्कने नसक्ने गरी माखेसाङ्गोमा बाँधिन पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई तिनै आफन्तले नै अवसानको बाटोमा हिडन बाध्य बनाए । माओबादीलाई तह लगाउनकै लागि गरिएको पार्टी एकता अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलपासो झै भएको छ ।
समयको कालखण्डसँगै जब प्रचण्डले आफुलाई मात्र हैन आफ्नाे सम्पूर्ण गुटलाई नै ओलीले निमिट्यान्न पार्न खोज्दैछन् भन्ने बुझे, उनले पनि आफ्नाे समूहलाई अझ दर्बिलो बनाउने अभियानमा लागे । आफुलाई पनि शक्तिसाली देखाउन बाध्य पार्ने ओलीलाई नै दवाव दिनसक्ने गरिको आफ्नाे छुट्टै समूह बनाए । अहिले प्रचण्डको समूह देखेर ओली आफै जिल परेका छन् । वर्षाैं देखिको आफ्नाे योजना सफल हुने नदेखेपछि अहिले भने प्रधानमन्त्री अत्तालिन थालेको झै देखिएका छन् । न वल्लो घाट न पल्लो तिरको अवस्थामा आईपुगेको बर्तमान सरकार पार्टी भित्रकै बहुमत सदस्यहरुको निर्णय पनि नमान्ने अवस्थामा आईपुगेको छ ।
पूर्व माओबादीलाई समेत समेटेर लान सकेको भए नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीले बर्षौसम्म राज्यसत्ता चलाउन सक्ने अवस्था सृजना हुँदै थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ र अहंकारले अर्को निर्वाचनसम्म पनि पुग्न नसक्ने अवस्थामा आएर बीच बाटोमै रोकियो । प्रचण्डलाई सितिमिति पछार्न नसकिने रहेछ भनेर अर्कै अभियानमा जुटेका छन् ।
वास्तवमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त ओलीले तानाशाही प्रबृत्तिको बाटो अबलम्बन गरे । आफु र आफ्ना आसेपासे भन्दा बाहिर निस्कने नसक्ने गरी माखेसाङ्गोमा बाँधिन पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई तिनै आफन्तले नै अवसानको बाटोमा हिडन बाध्य बनाए । माओबादीलाई तह लगाउनकै लागि गरिएको पार्टी एकता अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलपासो झै भएको छ । आफैले प्रतिबन्ध लगाएको बिप्लब नेकपालाई आश्वासनको पोको बोकेर संखुवासभा गएको भन्ने अस्पष्ट समाचारहरुले स्थान पाउँदै गर्दा नेपाली जनताले अनि स्वयं प्रचण्ड समूहले भने उनको यो दीवा स्वप्नालाई सिंगान पुछेर रद्दिको टोकरीमा मिल्क्याउने अवस्था देखिदैछ । नेतृत्वलाई कटु बचन बोलेर र आफु सधैं पावरमै हुन्छु झै गरेर पेलेर जाने प्रबृत्तिले पार्टी भित्र र सरकार भित्र दुबै तर्फ प्रधानमन्त्रीका आगामी दिन अझै असजिला हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
काठमाडौंमा पूर्व एमालेहरुको भेला, नेपाल पक्षका नेताहरु अनुपस्थित ३ हप्ता पहिले
ओली र नेपाल पक्ष सहमतिको नजिक, प्रचण्ड र झलनाथ सशंकित ७ महिना पहिले
जनयुद्धको सक्कली पाटो १० महिना पहिले
सापकोटालाई सभामुख बनाउन पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी एकमत १० महिना पहिले
त्रिपक्षीय स्वार्थमा बन्धक बनेको संसद ११ महिना पहिले
नेम्वाङलाई भेट्न प्रचण्डले गरे इन्कार ११ महिना पहिले
सचिवालय बैठकमै काटियो महासचिव पौडेलको केक ! २ मिनेट पहिले
बागलुङमा रहेका एचआइभी सङ्क्रमितहरु खुल्न थाले २३ मिनेट पहिले
कम्रेड अभिवादन ! बैठक धुम्बाराही हैन्, बालुवाटारमै ! १ घण्टा पहिले
महासंघको कोषाध्यक्षमा सकुन्तलाल हिराचन निर्वाचित २२ घण्टा पहिले
भन्सार छलेर चोरी निकासी गरी सुन ल्याउने २ जना नियन्त्रणमा २४ घण्टा पहिले
स्कुटर पल्टि‌ँ‌दा चालकको मृत्यु ७ घण्टा पहिले
वाणिज्य बैंकमा करेक्सन आउँदा, कुन सेक्टरमा देखियो अन्तिम समयमा चहलपहल ? २३ घण्टा पहिले
चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा एम्बुलेन्स खरिद १९ घण्टा पहिले
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल ( मंसिर १४ गते आइतबारदेखि २० गते शनिबारसम्म) २ दिन पहिले
नेपाल–भारत सीमा जोड्ने झोलङ्गे पुल दुई दिन खुल्ने ५ दिन पहिले
मकवानपुर एकैदिन दुई शव फेला ४ दिन पहिले
दिनेश मेमोरियल टी ट्वान्टी : सत्यम् पब्लिक कलेज ७९ रनले विजयी १ दिन पहिले
भारत र अमेरिकामा नेपाली चियाको लोगो दर्ता ७ घण्टा पहिले
गोकर्णेश्वरमा दैनिकजसो बत्ती जाँदा विद्यार्थीको जुम कक्षा प्रभावित ५ दिन पहिले
पेन्सन बुझ्न भारतको झुलाघाट पुगेका नेपाली अलपत्र ४ दिन पहिले
आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ सयले ओरालो ४ दिन पहिले
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ फेरि परीक्षण गर्ने तयारी ३ हप्ता पहिले
नगरपालिकाले कुहिने फोहरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने ४ हप्ता पहिले
धुम्बाराहीमा प्रचण्डले बोलाएको सचिवालय बैठक सुरु ४ हप्ता पहिले
कुमाल समुदाय : पाला बनाउने, सुकाउने र पोलेर तयार बनाउन व्यस्त ३ हप्ता पहिले
आज देशभर २८१७ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि ३ हप्ता पहिले
कोरोना भाइरसको खोप ९५ प्रतिशत सफल २ हप्ता पहिले
कर दिवसका अवसरमा आइएमईलाई चौथो वर्ष पनि सम्मान १ हप्ता पहिले
टिपरले ठक्कर दिँदा बालिकाको मृत्यु, चालक प्रहरी नियन्त्रणमा २ दिन पहिले
प्रहरीले पक्राउ गर्यो देशैभर लागूऔषधको गिरोह १ वर्ष पहिले
महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ : महामन्त्री कोइराला ११ महिना पहिले
कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न प्रदेश नं २को तयारी ९ महिना पहिले
बन्दाबन्दीमा एसइई परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई रेडियोबाट ट्युसन ७ महिना पहिले